I-SUChat: Insizakalo yokuthumela imiyalezo esheshayo yomphakathi | Kusuka kuLinux
Ukuqhubeka nochungechunge lwethu lwezihloko ezihlobene namawebhusayithi athakazelisayo futhi awusizo we Umphakathi Womsebenzisi i-del Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux, nalabo abathintekayo nge imfihlo, ukungaziwa y Ukuphepha kwe-cyber Ngokuvamile, namuhla sizokhuluma ngewebhusayithi ebizwa I-SUChat.
I-SUChat iyiwebhusayithi encane ewusizo enikezela nge- insizakalo yokuthumela imiyalezo esheshayo yomphakathi esuselwa kumthetho olandelwayo we-XMPP, ehlonipha ubumfihlo babasebenzisi futhi ivumela ukuxhumana ngesikhathi sangempela phakathi kwawo wonke amalungu ayo.
Ngaphambi kokufaka ngokugcwele ukuphawula kuwebhusayithi ye I-SUChat, Kuyaphawuleka ukuthi kwezinye izikhathi siye saphawula ngamanye amasayithi afanayo, njenge I-NoGAFAM namathuluzi wobumfihlo, esikuchaza kafushane kulokho okuthunyelwe kwangaphambilini kanje:
"INoGAFAM yiwebhusayithi engagqugquzeli kuphela iFree Software, kepha futhi ekhuthaza nabanye ukuthi bazi ngenani lemininingwane ekhiqizwe kwi-Intanethi, kanye nobungozi ababa nabo lapho besebenzisa amapulatifomu, izinhlelo zokusebenza kanye nezinsizakalo zeGlobal Technology Giants eziningi, amaningi awo aziwa ngeGAFAM". I-NoGAFAM: Iwebhusayithi ethokozisayo nokunyakaza kweSoftware Emahhala
"I-Privacytools yiwebhusayithi enikeza ulwazi namathuluzi okuvikela ubumfihlo bakho ekulandelweni komsebenzisi emhlabeni jikelele. Futhi silinganisa umphakathi ochumayo wabantu abanomqondo wobumfihlo onjengawe ukuxoxa futhi ufunde ngentuthuko entsha ekuvikeleni idatha yakho ku-inthanethi. Le webhusayithi ingumongo wenhlangano yethu, lapho sicwaninga futhi sincoma izixazululo ezahlukahlukene zesoftware yomphakathi wethu." UbumfihloAmathuluzi: Iwebhusayithi ebalulekile futhi ewusizo yobumfihlo obuku-inthanethi
1 I-SuChat: Imiyalezo esheshayo esuselwa kumthetho olandelwayo we-XMPP
1.1 Kuyini iSuChat?
1.2 Izici zesayithi nomsebenzi womphakathi
1.3 Ukuhlanganiswa nezicelo zamahhala nezikhululekile
1.5 Nikela kuSUChat
I-SuChat: Imiyalezo esheshayo esuselwa kumthetho olandelwayo we-XMPP
"I-SUChat.org iyinsizakalo yemiyalezo esheshayo esakazwa emphakathini esuselwa kumthetho olandelwayo we-XMPP, ohlonipha ubumfihlo bakho futhi ovumela ukuxhumana ngesikhathi sangempela nabangani bakho nomndeni wakho ngaphandle kokukhathazeka ngokuphepha nobumfihlo. Dala i-akhawunti, landa iklayenti elisekela iJabber / XMPP, engeza abangani futhi uxhumane ngokukhululeka ngokuphepha okuphelele."
Izici zesayithi nomsebenzi womphakathi
Ukuphepha: Konke ukuxhumeka kumaseva kubethelwe kusetshenziswa kuphela izivumelwano zokubethela eziqinile kanye nama-algorithms. Amaphasiwedi awagcinwa ku-database, futhi kusetshenziswa ifomethi ye-SCRAM.
Izipele: Kanye ngosuku, kwenziwa isipele ngokuzenzakalela sayo yonke idatha. Amaseva alungiselelwe ngokuphelele uma kwenzeka ukwehluleka noma ezinye izinkinga zobuchwepheshe.
Ukusebenza: Amaseva ahlinzeka ngezinto ezintsha zakamuva, isb. Ukuvikelwa kogaxekile, ukulayishwa kwefayela le-MAM, i-HTTP. Zivikelwe ekuhlaselweni yi-DDoS futhi zisekela umthetho olandelwayo we-IPv6.
Note: Insizakalo yomphakathi neyamahhala yeSUChat yakhiwa iqoqo lamaseva alo amabili, okwabelana umthwalo nokuthuthukisa ukuzinza. Uma kwenzeka kwehluleka iseva eyodwa, uhlelo luyaqhubeka nokusebenza.
Ukuhlanganiswa nezicelo zamahhala nezikhululekile
Kulabo bethu abanquma ukusebenzisa kusho umsebenzi womphakathi wamahhala, abaphathi bombiko ofanayo abasebenzisi abangasebenzisa i amaklayenti wokuthumela imiyalezo mahhala futhi avulekile okulandelayo, uma ungafuni noma ungakwazi ukusebenzisa ipulatifomu yewebhu ngqo:
Khumbula ukuthi umsebenzi womphakathi wamahhala weSUChat kufaka phakathi i- akukho ukukhangisa komuntu wesithathu futhi i akukho ukulandela ngomsebenzisi. Noma kunjalo, bathanda noma yikuphi iphrojekthi yamahhala, evulekile nevulekile badinga imali yokugcina impahla efanayo. Ngakho-ke uma usebenzisa insiza yamahhala noma ufuna ukubasekela, ungakwenza ngokulandelayo isixhumanisi.
Futhi uma ufuna ukwazi enye iwebhusayithi efanayo, sincoma ukuthi uhlole okulandelayo isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «SUChat.org», iwebhusayithi encane ewusizo enikezela nge insizakalo yokuthumela imiyalezo esheshayo yomphakathi esuselwa kumthetho olandelwayo we-XMPP, ehlonipha ubumfihlo babasebenzisi futhi ivumela ukuxhumana kwesikhathi sangempela phakathi kwawo wonke umuntu; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » I-SUChat: Insizakalo yemiyalezo esheshayo yomphakathi
Ukukhiqiza Okukhulu: Uhlelo Lokusebenza Nokwenza Isikhathi